Kibirka Iyo Isla Waynida Ayaa Ugu Horaysa!! Sadex Waxyaabood Oo Keeni Karta In Zlatan Ibra Isagoo Cago Maran Isaga Cararo Premier League. - iftineducation.com
Kibirka Iyo Isla Waynida Ayaa Ugu Horaysa!! Sadex Waxyaabood Oo Keeni Karta In Zlatan Ibra Isagoo Cago Maran Isaga Cararo Premier League.
aadan21 / July 31, 2016
iftineducation.com – Waxaa Qoray : Maxamuud Cabdi Saciid Fantastic on July 30, 2016.
Malaha Jose Mourinho ayaa ku qasbanaan doono inuu kursi ag dhigto dhiigiisa cusub ee Zlatan si uu u fahansiiyo waxyaabaha qaar ee aan ka shaqaynayn horyaalka England.
Kibirloowga reer Sweden ayaa markii ugu horaysay ka xamaalan doona horyaalka xamaaliga loo so doonto ee PL, laakiin wuxuu u baahnaan doona inuu isla ilaawo dabcigiisa si uu ugu guulaysto halkaan.
Kooxda.com iyo Tifaftirahooda Maxamuud Cabdi Saciid Fantastic ayaa idiin soo qaaday sadex waxyaabood oo keeni karta inuu Premier League ku fashilmo.
1. Inuu Iska Ilaawo Dabeecadiisa Xun: Zlatan ayaa lugu yaqaan nin aad u kulul oo weliba gacan fudud markii ciyaartooy qalad ka galo, waxana marar badan la arkay isagoo casaan qaadanaya, taas ayaana keeni karta inuu si dhaqso ah ugu fashilmo horyaalka aduunka ugu xamaasada badan ee Premier League.
Mararka qaar wuxuu ka dhaga adeega amarada Garsoorayaasha sida aad ku arki karto markii uu joogay Italy iyo France, laakiin sheekadaan kama shaqaynayso halkaan.
2. Inuu Joojiyo Kibirka, Isla Waynida Iyo Inuu Waxkale Iska Dhigo: malaha aqristayaasheena Kooxda.com ayaa la yaabi doonaa maqaalkaan aan ka qornay Zlatan, laakiin way arki doonaan in waxaan oo dhan dhacaan hadii uu ku dhaqmo, iyadoo keliya labo isbuuc ka harsan tahay inuu dib u furmo Premier League.
Ninka reer Sweden ayaa ahaa ninkii ugu kibirka badnaa horyaalka France, Tusaale yar waxaa la xasuusto hadalkii ahaa “Dalkaan France Waa F*ck, ma istaahilo in lugu noolaado” hadalkaan ayuu yiri xilli ciyaareedkii hore markii uu ka xanaaqay qalad uu ka galay garsooraha, laakiin miyeey kula tahay in sheekadaan halkaan ka shaqaynayso, maya hadii uu dalkaan saxaafada iyo lacagta ku caanbaxay uu sidaas u aflagaadeeyo malaha wuxuu iska ilaawo doonaa inuu gudaha England kasii xamaasho.
3. Inuu Mar Walba Ka Dhuunto Oo Uusan Isku Soo Jeedin Saxafada Sida Sakiinta Ah Ee England: malaha kafantakiisa iyo hadaladiisa wayn ayaa keeni karta inuu soo jiito saxaafada England oo uu isagu laftarkiisa godkii uu gali lahaa gacmahiisa isugu qodo!
Wiilkaan Kantaroolka cajiibka ah leh ayeeysan wax shaki ah nooga jirin inuu saxaafada England u shidi doona bogagooda ciyaaraha maalin walba iyo isbuuc walba, laakiin hal qalad oo ka dhaca ayaa keeni karta in lugu cadaabo oo wax kale lugu noqdo!
Marka kulamada waa wayn jiraan waxaa hubaal ah in saxaafada sakiinta ka daran ee England war u doonan doonaan ninkaan Ibra iyo macalinkiisa soo jiidashada badan ee Jose, laakiin hadii Zlatan uu wax gaf ah ama aflagaado ku sameeyo garoonka dhexdiisa, saxaafada England ayaa sheekadaas iska ilaawi doona waxaana jiri doonta in qaladkiisa lugu cadaabo.
Meel kale haka doonin! maxaa keenay in Jose Mourinho oo keliya lix bilood kasoo wareegtay markii uu Chelsea u qaaday horyaalka hadana shaqadiisa waayo? waa sax waxaa maankaaga ka guuxayo waa uu fashlimay oo qaab ciyaareedkii ugu xumaa ee ebid inta uu macalin soo ahaa ayuu ku biloowday, laakiin saxaafada England oo saaxiib dhow la ahaa ninkaan ayaa ka dambeeyey inuu shaqadiisa waayo, iyadoo mulkiilaha Chelsea uu subax walba aqristo wargaysyada England kuwaas oo milix usii mariyey in ninkaan Blues taariiqda u keenay ee Special One boorsadiisa banaanka loo dhigo!
Hadii guuldaro la isku burinayo waxaa malaha u qalmi lahaa Arsen Wenger kaas oo Gunners ku hogaamiyey mudo 9 sano ah oo uusan wax koob ah qaadin, laakiin Zlatan ayeey u muuqata inuu wacdaro ka dhigi doono Maslaxa Riyada laakiin waa hadii? haa waa hadii uu ka fogaado qodobada aan kor kusoo sheegnay!
Adigana aqriste waad nala wadaagi kartaa fikirkaaga maadaama aad tihiin dadka aan qormadaan cajiib ah usoo turjunay!!
Erdogan oo raba in ay hoos yimaadaan sirdoonku